Kuwani waa qaar ka mid ah sawirradii laga qaaday meelo kala duwan oo Afrika ah - BBC News Somali
Kuwani waa qaar ka mid ah sawirradii laga qaaday meelo kala duwan oo Afrika ah
Image caption Mid ka mid ah 51-dii arday ee ugu fiicneyd sannad dugsiyeedkii 2016-2017 ee dalka Ivory Coast oo ku fadhida kursiga madaxweyne ku xigeenka dalkaasi Daniel Kablan Duncan xilli ardaydan ay soo booqdeen madaxtooyada Abidjan.
Qaar ka mid ah ardaydii ugu wanaagsanayd dalka Ivory Coast ayaa lagu casuumay madaxtooyada Abijan, waxaana ka mid ahayd gabadhan sawirka ka muuqata ee ku fadhida kursiga madaxweyne ku xigeenka dalkaas.
Image caption Dumar u dhashay dalka Tunisia ayaa ka qeybqaadanaya dabaaldegga maalinta haweenka, iyaga oo xiran dharka hiddaha iyo dhaqanka.
Magaalada caasimadda ah ee Tunis, dumarkan sida quruxda badan u soo labistay ayaa ka qeybqaadanaya maalinta haweenka dalkaasi ee loo yaqaano Sefreri.
Image caption Waxaa halkan ka muuqda taallo dadkii hore ay lahaayeen oo dhulka hoostiisa laga soo qoday dalka Masar.
Taallo qadiimi ah oo laga soo qodey dhulka hoostiisa, dowladda Masarna waxa ay sheegtey in ay astaan u tahay mid ka mid ah boqortooyooyinkii hore ee dalkaasi soo maray.
Image caption Labo ka mid ah orodyahannada dalka Botswana ee tartanka 400 mitir ayaa la kulmay xaalad aan fiicnayn London, ka dib markii uu dhulka kaga dhacay garuunkii astaanta orodada, waxayna sidaasi ku waayeen kaalintii ay ka gali lahaayeen tartanka.
Labo ka mid ah orodyahanada dalka Botswana ee tartanka 400 mitir ayaa la kulmey xaalad aanan fiicneyd London kadib markii uu dhulka kaga dhacay garuunkii astaanta orodada, waxayna sidaasi ku waayeen kaalintii ay ka gali lahaayeen tartanka ee ay ugu soo gudbi lahaayeen ciyaaraha kama dambeysta ah.
Image caption Taageerayaasha xisbiga Jubilee ayaa dabaaldagaya ka dib markii guddiga doorashooyinka Kenya uu ku dhawaaqay in Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay madaxweynenimada Kenya 11-kii August, 2017.
Guddiga IEBC ayaa sheegey in Uhuru uu doorashada ka heley 54%, halka Raila Odinga uu heley 45% , taasi ayaa keentey in taageerayaasha xisbiga talada haya ay dabaaldegyo sameeyaan.
Image caption Hoggaamiyaha mucaaradka Kenya Railla Odinga ayaa kasoo muuqday xaafadda Mathare ee Nairobi si uu ula hadlo taageerayaashiisa, Odinga waxa uu diiday in uu aqbalo natiijada doorashadii dhacday.
Labo maalmood ka dib markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada Kenya, Raila Odinga ayaa taageerayaashiisa kula hadlay meelo kala duwan, wuxuuna sheegay in uusan aqbalsanayn natiijada.
Lahaanshaha sawirka Roderick MaCleod/BBC
Image caption Eva Msando waa haweeneydii uu ka geeriyoodey Chris Msando oo ahaa mas'uul sare oo ka tirsan guddiga doorashooyinka Kenya, kaas oo meydkiisa la helay. Eva waxa ay ka qeybgalaysaa baroordiiq loo sameeyey ninkeeda.
Kaniisad ku taala magaalada Nairobi ayaa aas iyo baroordiiq loogu sameeyey mas'uulkii IEBC ee meydkiisa la heley maalmo ka hor doorashadii dhawaan Kenya ka dhacday. Baaritaan ayaa ku socda ciddii dishay Msando.
Image caption Dad mudaaharaad dhigaya ayaa kasoo hor muuqday safaaradda Masar ee London ku taala, waxa ay ifinayaan xaaladda wariye Maxamuud Abu Zeid oo ku xiran dalka Masar.
Banaanbaxayaasha ayaa waxa ay dalbanayaan in la soo daayo wariye Maxamuud Abu Zeid oo Masar ku xiran tan iyo sannadkii 2013-kii, ka dib markii sida la sheegay lagu eedeeyey in uu sawirro ka qaaday militariga Masar xili ay hawlgal ku jireen.
Image caption Waa nin dawaarle ah oo lagu magacaabo Ganiyu Oyinlola oo ku sugan goobtiisa shaqo ee magaalada Lagos ee dalka Nigeria
Waa nin dawaarle ah oo lagu magacaabo Ganiyu Oyinlola oo ku sugan goobtiisa shaqo ee magaalada Lagos ee dalka Nigeria
Image caption Gabrielle Engels ayaa sheegtay in ay gacan-qaad kala kulantay xaaska madaxweynaha Zimbabwe , Grace Mugabe
Gabrielle Engels ayaa saxaafadda kula hadashay Johannesburg, waxayna sheegtey in ay gacan-qaad kala kulantay xaaska madaxweynaha Zimbabwe, Grace Mugabe. Gabadhan ayaa qabsatay garyaqaanka ugu caansan Koonfur Afrika Gerrie Nel.
Image caption Koox shaqaale ah ayaa qabuuro ka qodaya meesha lagu magacaabo Paloko ee dalka Sierra Leone
Dad badan ayaa lagu aasayaa dalka Sierre Leone, kuwaasi oo ku dhintay masiibo ka dhalatay dhoobo ka soo rogmatay buuro u dhow magaalada Free Town ee caasimadda dalkaasi. 400 oo qof ayaa la rumeysan yahay in ay ku dhinteen masiibada. 3,000 oo kale ayaa iyaguna ku guryo beelay.
Image caption Waa hooyo barooranaysa oo ku sugan isbitaalka Free Town hortiisa, iyada oo ka war sugaysa ehelkeeda oo ku waxyeeloobay masiibada dhoobada soo rogmatay ee Sierre Leone
Waa hooyo barooranaysa oo ku sugan isbitaalka Free Town hortiisa, iyada oo ka war sugaysa ehelkeeda oo ku waxyeeloobay masiibada dhoobada soo rogmatay ee Sierre Leone, maalin kadib waxa ay ogaatay in wiilkeeda uu ku dhintay masiibadda.
Image caption Ilmo yar ayaa eegaya gaadiid kuwa dagaalka oo ay leedahay Qaramada Midoobay, gobolka Dafur ee dalka Sudan
Ilmo yar ayaa eegaya gaadiid kuwa dagaalka oo ay leedahay Qaramada Midoobay, gobolka Dafur ee dalka Sudan, halkaasi oo saraakiil ka socota Qaramada Midoobay ay kormeer ku samaynayaan ilaa 5,000 oo ah qaxooti ku barokacay gudaha dalkaasi Sudan.
Sawirrada waxa ay xuquuqdooda u dhawrsan yihiin AFP, EPA, Getty Images iyo Reuters.